All Ebooks :: Malagasy :: Ireo Mpihatsaravelantsihy (E BOOK)
HomeAll EbooksMalagasyIreo Mpihatsaravelantsihy (E BOOK)
Ireo Mpihatsaravelantsihy (E BOOK)
Feno olona mahay mihatsaravelan-tsihy izay afaka ny ho tonga mpamadika tanteraka ny fiangonana. Ny fanalahidin’ ny satana lehibe indrindra hatrizay dia ny fitaka sy ny fihatsaram-belatsihy. Ireo mpitarika tsy mahita izay saroman’ ny saron-tavan’ ny mpihatsaravelatsihy dia hijaly amin’ ny...
Feno olona mahay mihatsaravelan-tsihy izay afaka ny ho tonga mpamadika tanteraka ny fiangonana. Ny fanalahidin’ ny satana lehibe indrindra hatrizay dia ny fitaka sy ny fihatsaram-belatsihy. Ireo mpitarika tsy mahita izay saroman’ ny saron-tavan’ ny mpihatsaravelatsihy dia hijaly amin’ ny fahajambany.
Fanahy ratsy miady amin’ ny asa fanompoana ny fandrahonana, fifankazarana tafahoatra ary ny fikorontanan-tsaina. Amin’ ny akamaroan’ ny fotoana dia tsy fantatrin’ ny olona akory izay miady aminy. Hanamp anao hamantatra sy heady ny fahavalo avy ao anatinao ity boky ity.